Ukunakwa Sicela Funda Ngaphambi Ithumela / Attention Veuillez lire avant de poster
2 iminyaka inyanga 1 edlule - 2 iminyaka inyanga 1 edlule #131 by Gh0stRider203
Siyakwamukela ku-Rikoooo Forum ukuze FSX / FSX Steam Edition.
Sicela uqaphele, ukuthi lesi nkundla inikeza IsiZulu eyodwa, futhi isiNgisi kuphela olukhulunywa lapha.
Ngoba lowo isiFulentshi, sicela uye lapha: www.rikoooo.com/fr/forum/
Bienvenue sur le iforamu Rikoooo uthele FSX / FSX Steam Edition.
Notez que ce iforamu is l'Anglais, et que l'Anglais is parlé Ici .: www.rikoooo.com/fr/forum/
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 inyanga engu-1 edlule Gh0stRider203.
Isikhathi ukudala page: 0.333 imizuzwana